Trump oo xabadka u gaaracay difaaca wiilka uu soddoga u yahay - BBC News Somali
Trump oo xabadka u gaaracay difaaca wiilka uu soddoga u yahay
29 Maajo 2017
Image caption Jared Kushner hadda waa mid ka mid ah la taliyayaasha sar sar ee Donald Trump
Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey taageerada uu u u hayo wiilka uu Soddoga u yahay ee Kushner, tani oo la xirriirta wararka ku aadan uu isku dayay sammeynta khad isgaarsiineed oo qarsoodi ah oo lala sammeeyo xukuumadda Ruushka.
Hadal qoraal ah oo loo gudbiyey jariirradda New York Times, ayaa Mr Trump wuxuu ku ammaanay "shaqada fiican" ee uu hayo Mr Kushner. Laakiin wuxuu ka gaabsaday in uu toos u sheego eedeymaha ka dhanka ah ninka ay u dhaxdo gabadhiisa Ivanka Trump.
Waxaa la sheegay in Mr Kushner uu wadahadal ka galay hannaan lagu sameynayo isgaarsiin qarsoodi ah, wadahadalkaasi oo uu la yeeshay danjiraha Ruushka u jooga Mareykanka bishii December.
Wargeysyada The New York Times iyo Washington Post ayaa sheegay in uu doonayey in uu isticmaalo adeega isgaarsiineed ee Ruushka si uu uga gambado in Mareykanku dhagaystaan wadahadalladda Moscow, waxaana la sheegay in uu arrimahan sameeyeey ka hor intii aan la dooran Mr Trump, xilliaasi uu ahaa shakhsi caadi ah.
Eedeymaha ayaa soo baxay ka gadaal markii Mr Kushner uu sheegay in uu ku jiro baaritaan ay wado FBI-da oo ku saabsan in Ruushka uu faragaliyey doorashadii Mareykanka ee 2016.
Image caption Mr Kushner waxay is qabaan gabadha Mr Trump ee lagu magacaabo Ivanka
Wararka ka imaanaya Mareykanka ayaa sheegaya in baarayaashu ay rumaysan yihiin in uu hayo macluumaad arrimahan la xiriira, laakiin ma ahan mid hubanti ka dhigaysa dambi looga shakisan yahay.
Mr Trump - oo sheegay in uu kula kulmay Aqalka Cad Qareenadda maalimadii Axadda , kammana waaban taageeradiisa Mr Kushner, kaasi oo haya xilka la taliyaha sare ee Aqalka Cad.
"Jared wuxuu u hayaa shaqo wanaagsan wadanka . Waxaan ku qabaa kalsooni buuxda isaga," ayuu ku yiri hadalka qoraal ah ee lagu daabacay New York Times.
"Qof kasta ayaa tixigalin wayn u haya, waxaana uu ka shaqeynayaa barnaajijyo wadankeenna u baajina balaayiin doolar, taasi waxaa sii dheer oo dabcan muhiimad balaaran sii leh in uu yahay qof aad u fiican" ayuu yiri Trump.
Hadalka Mr Trump ayaa yimid ka dib markii saraakiil sar sare oo maamulka ka tirsan ay hoos u dhigeen eedeymahaas iyagoo ka gaabsaday inay sheegaan in ay run yihiin ama been yihiin.
Xoghayaha arrimaha gudaha Mareykanka John Kelly ayaa u sheegay Telefishinka ABC News maalinimadii Axadda in ay tahay "Wax iska caadi ah" isl markaana "La aqbali karo" in la diyaarin karo xiriir isgaarsiineed oo qarsoodi ah oo lala sameeyo quwadaha shisheeye.